မီးသတ်ယာဉ်နဲ့ရေပက်ခံထွက် ဆိုင်ကယ် တိုက်မှု မြင်ကွင်း ဓါတ်ပုံများ
ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ သင်္ကြန် အတက်နေ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့မှာ မီးလောင်မှုကို ငြှိမ်းသတ်ဖို့သွားရောက်တဲ့ မီးသတ်ယာဉ်နဲ့ရေပက်ခံထွက် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတိုက်မိခဲပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မိမှုကြောင့်ဆိုင်ကယ်မောင်းသူ ဦးဇင်မင်းအသက် ၃၂ နှစ်နှင့် အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ ဒေါ်လှလှဌေးတို့မှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ပြီးပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်အတွင်းလူနာ အဖြစ်ကုသခံနေရတယ်။ ဆိုင်ကယ်နောက်တွင်ပါလာသည့် သမီးဖြစ်သူ အသက် ၇ နှစ်ရှိ မအေးဇာဇာထွန်းမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သကြန်အတက် ညနေ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်မှာ ပြည်မြို့ ရွာဘဲနယ် မြေ၊ အောင်သုခရပ်ကွက်ရှိ ကြက်ခြံတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာကို မီးငြှိမ်းသတ်ရန်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခေတ္တရာမြို့သစ်အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးသတ်ယာဉ်ဟာ ရေကစားမဏ္ဍပ်ရှေ့မှ ဖြတ်ဝင်လာပြီး ဆိုင်ကယ်ကို တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီယာဉ်တိုက်မှုနဲ့ ပါတ်သတ်လို့မျက်မြင်တွေ့ ရှိခဲ့သူ ကိုပြေလင်းဆက် က Myanmar News Now ကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။ "အတိုက်ခံရတဲ. ခလေးလေးက ပွဲခြင်းပြီး အကြိတ်ခံလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်လဲ အဲ.ဒိနားမှာရှိတယ်အကို။ မြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာလို.ပြီးတော. မီးလောင်လို.သွားတဲ့ ပြည်ကမီသတ်ကားအများစုဟာ မီးလောင်ပြီဆိုရင် တကယ်ကို စည်းကမ်းမရှိတော.ပဲ၊ တွေတဲ.လူဆဲ၊ ငါတိုက်ချင်လဲတိုက်လို.ရတယ်ဆိုတဲ. အတွေးတွေပဲရှိတယ်အကို။ "Myanmar New Now ယာဉ်တိုက်မှုမြင်ကွင်းကို ကိုပြေလင်းဆက် မှာ ရိုက်ကူးပေးပို့ ထားတာပါ။
မီးသတ်ကားအောက်မှာ ညက်ညက်ကျေသွားတဲ့ ရေပတ်ခံဆိုင်ကယ်
4/21/2012 11:31:00 PM
ကျိုက်ဝိုင်းဘု၇ားလမ်းနှင့်ပြည်လမ်းထောင့်တွင် ကွမ်းယာေ၇ာင်းနေသူအမျိုး သမီးအား အငြိမ်းစားမြို့ နယ်မှူး၏သားဖြစ်သူ ဘကျော်(ခ)ဦးကျော်ဇင် ၉ မိုင် ဗိုလ်ဥာဏလမ်းတွင်နေထိုင်သူ ကားနံပါတ် လ/၈၇၅၅ ဆိုသူမှ ဆိုင်ေ၇ှ့ တွင် ကား၇ပ်ပြီး ကွမ်းယာတယာပေးဟု မောက်မာစွာတောင်းပါသည်..ကျွန်မမှာ ဗိုက်ခွဲ၍မွေးဖွားထားသော မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်..မီးဖွားထားသည်မှာ ( ၃၃ ) ၇က်ပဲအကြာပဲ၇ှိပါသေးသည်..ထို့ ကြောင့်ကွမ်းယာအား ထ မပေးနိုင် ခဲ့ပါ..ထို့ သို့ မပေး၍ ကားပေါ်မှပြေးဆင်းလာပြီး ညစ်ညမ်းစွာဆဲဆို၍ ၇င်ဘတ် အားဖိထားပြီး ဆံပင်ကိုဆောင့်ဆွဲ ပါးနားပြင်းထန်စွာ ဘယ်ပြန်ညာပြန်၇ိုက်ပါ သည်....ပျဉ်ချောင်းဖြင့် လက်ကို ၂ ချက် ခါးကို ၂ ချက် တင်ပါးကို ၁ ချက်၇ိုက် ပါသည်... အပြည့်အစုံအားပေးပို့ လာသောစာတွင် ဖတ်၇ှု့ နိုင်ပါသည်...
By: Myat Phone Linn
4/21/2012 09:43:00 PM
မြန်မာပြည် ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့ ပတ်သက်လို့ မကောင်း သတင်း တွေ မကြာခဏ ကြားရတတ်လေ့ရှိ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ရန် ပထမအဆင့် (၃) ဦးယာယီရွေးချယ်
မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ရန် ပဏာမရွေးချယ်ထားသူ (၁၃) ဦးအား ၂၀၁၂
ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ၊ ၇ရက်နေ့တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခဲ့ရာ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် နီးစပ်သူ
(၃) ဦး ကို ယာယီရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို (၃) ဦး၏ အမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်
မောင်ကျောက်ခဲ ၁၅၂ မှတ်
နေဦး (ခ) နန္ဒမိုး ၁၃၈
သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဇာတ်ရုပ်နှင့်ပို၍
အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော သရုပ်ဆောင်ကို ထပ်မံကြိုးစားရှာဖွေလိုပါသောကြောင့် (၂၅.၄.၂၀၁၂)
မှ (၀၇.၀၅.၂၀၁၂) အတွင်း လျှောက်လွှာများတင်နိုင်ရန် ထပ်မံ၍ ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း
ကို သတင်းစာ ၊ ပြည်တွင်းဂျာနယ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ၀က်ဆိုဒ်(website) နှင့် ဖေ့ဘုတ်(Facebook) စာမျက်နှာတို့တွင်
ဖော်ပြ သတင်းထုတ်ပြန်ပြီး ဖြစ်ပါသည် ။ Bogyoke Aung San Movie
4/21/2012 07:40:00 PM
Myanmar President U Thein Sein sits next to Japan Prime Minister Yoshihiko Noda in Japan-Mekong summit in Tokyo April 21, 2012. နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ် ဧပြီ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်-YPI မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပေးဆပ်ရန်ရှိသည့် ကြွေးမြီ ကန်ဒေါ်လာ ၃.၇၂ ဘီလျံကိုလျှော်ပစ်လိုက်ပြီး နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများ ပေးသွားရန် ဂျပန်နိုင်ငံမှ သဘောတူလိုက်ကြောင်း ရိုက်တာ သတင်းဋ္ဌာန၏ ဖေါ်ပြချက် အရသိရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်မှုများ ဘက်အသီးသီးတွင် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိခြင်းကို
ထောက်ခံသည့် အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ကြွေးမြီများအား လျှော်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကာ ဂျပန်-မြန်မာ စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှုကိုလည်း တိုးမြှင့်သွားမည်ဟု ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီကို နိုဒ က ပြောကြားကြောင်း ယင်းသတင်းတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ ယမန်နေ့မှ စတင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီး ယခုလို ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်တဦးနှင့်
ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်တို့ ၂၈ နှစ်အကြာကာလအတွင်းပထမဆုံး အကြိမ်တွေ့ဆုံမှုလည်း ဖြစ်ကာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်ကြာ အထီးကျန်နေထိုင်ခဲ့သည့်
မြန်မာနိုင်ငံအား ယင်းအဖြစ်မှ အဆုံးသတ်စေမည့် နောက်ထပ် ခြေလှမ်းတလှမ်းဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံခြား သတင်းမီဒီယာများ ကဖေါ်ပြကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပြန်ဆပ်ရန် ရှိသည့် ချေးငွေနှင့် အတိုးစုစုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ ၄.၉ ဘီလျံအနက် ၃.၇၂ ဘီလျံကို လျှော်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း ကြွေးမြီ ၃.၇၂ ဘီလျံမှာ မြန်မာဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ် အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ချေးယူထားသည့် ကြွေးမြီများဖြစ်သည်။ ။
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် နိုင်ငံရေးကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဆောင်ရွက်နေသော အထက(၆) ဗိုလ်တထောင်(စိန်ပေါလ်)ကျောင်းသားဟောင်းများအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားကို
ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် ဒီကနေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့
နေ့လည် ၁၀း၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားမှာ ဗိုလ်တထောင်(စိန်ပေါလ်)ကျောင်းသားဟောင်းများဖြစ်သော
ကိုမြအေး၊ ကိုနေကျော်၊ ဒေါက်တာ သာမြကျော်၊ ကိုမြတ်စံ၊ ကိုနေဘုန်းလတ်၊ ကိုဇော်ထက်ကိုကို၊ ကိုအောင်ဇေဖြိုး၊ ကိုဖြိုးဇေယျာသော် နှင့် ကိုဝင်းထွဋ် တို့ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ဘားမားဗီဂျေ သစ်ထူးလွင်
တိုကျို ဧပြီ ၂၁
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းနှင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်တိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများတွင် ဂျပန်နိုင်ငံက အကူအညီပေးရန်ရှိကြောင်းသိရသည်။
တိုကျိုမြိုကတွင် ဧပြီင်္၂၁ရက်က ကျင်းပသည့် မဲခေါင်-ဂျပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဂျပန်က ညွှန်းဆိုပြသသည့် မဲခေါင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံ(၅) နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများတွင် အဆိုပါ စီမံကိန်းနှစ်ခုအားရေးဆွဲထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုငငံက (၁၂)ခု။ကမ္ဘောဒီးယားက (၈)ခု၊လာအိုက (၇)ခု၊ထိုင်းက (၄)ခု၊ဗီယက်နမ်က (၂၆)ခုတို့ဖြစ်ကြသည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်း (၅၇)ခုကို မိမိတို့အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါကြောင်း ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရိုရှီဟီကိုနိုဒက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
မဲခေါင်ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဂျပန်က အထောက်အပံ့ ယန်းဘီလျံ ၆၀၀ပေးမည်
ဂျပန်နိုင်ငံက ပင်လယ်ရပ်ခြားအထောက်အပံ့(အိုဒီအေ)း ယန်း ၆၀၀ဘီလျံကို လာမည့်သုံးနှစ်အတွက် ပေးအပ်သွားမည်ဟု ဂျပန်နိုင်ငံကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။
ဧပြီ၂၁ရက် နံနက်က ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့အစိုးရဂဧည့်ဂေဟာတွင် ကျင်းပနေသော မဲခေါင်-ဂျပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးတွင် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရိုရှီဟီတိုနိုဒက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်င့တော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆန်၊ လာအိုဝန်ကြီးချုပ် သွန်ဆင်းသမာဗောင်၊ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စရင်လတ်ရှင်နာဝပ်နှင့် ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာငုယင်တန်ဇွန်းတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
`အခု စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ ဒေသတွင်းဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲက နူကလီယားမပျံ့
ပွားရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီး တိုကျိုမဟာဗျူဟာ ၂၀၁၂နှင့်အတူ မဏ္ဍိုင်ကြီး(၃)ရပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေကို သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ တိုကျိုမဟာဗျူဟာ(လုပ်ငန်းစဉ်)များ အောင်မြင်ရေးအတွက်အပြည့်အ၀ပူးပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်` ဟု မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားသည်။
မဲခေါင်ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဲ့ ဦးဆောင်ဦးရွက်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အကြောင်းကတိပေးပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကလည်း မဲခေါင်ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိ်ုးရေးအတွက် ထိုင်းက အထောက်အပံ့ ဒေါ်လာ ၇၇သန်းပေးရေးအစီအစဉ်များကို လည်းထပ်မံတင်ပြသွားခဲ့သည်။
စာမျက်နှာ ၁၂မျက်နှာပါ ၂၀၁၂ တိုကျိုမဟာဗျူဟာအစီအစဉ်တွင် မဲခေါင်ဒေသတွင်းချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊အတူတကွဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူသားဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ သေချာအောင်လုပ်ဆောင်ရေး ဟူသည့် မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်ကိုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်ဖော်ပြပါရှိသည်။
မဲခေါင်-ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်း အဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး များတက်ရောက်စဉ်။
တစ်ချိန်က စစ်အာဏာရှင် စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခုအခါ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ စုပြုံဝင်ရောက်နေတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာနေပါတယ်။ မနှစ်က
ခရီးသွားဧည့်သည် (၄) သိန်းကျော် လာရောက်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ်မှာတော့ အရေအတွက် နှစ်ဆတိုးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရကြောင်း Euro News က ဖော်ပြပါတယ်။ Khiri Travel Group ရဲ့ အထွေထွေ မန်နေဂျာ မစ္စတာ Edwin Briels ကတော့ - ဟိုတုန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတော့ မသွားကောင်းတဲ့အရပ်လို့ ခရီးသွားတွေက မှတ်ယူခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ သွားကောင်းတဲ့အရပ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ အတော်များများကတော့ စူးစမ်းချင်လို့ လာကြတာပါ။ ဒီကိုရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေထဲမှာ ရိုးရိုးခရီးသွားတွေထက် အခွင့်အလမ်း လာရှာတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေက ပိုပြီးများတယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သာယာလှပတဲ့ ရှုမြင်ကွင်းတွေ၊ ရှေးဟောင်း စေတီပုထိုး ဘုရားကျောင်းကန်တွေ ရှိသလို တစ်ဘက်မှာလည်း ပြည်သူအများစုကြီးရဲ့ လူနေမှုဘ၀ အခြေအနေက နိမ့်ကျနေဆဲ၊ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေက စိုးရိမ်စရာ ကောင်းဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပြိုင်တည်းမှာ အကောင်းဘက်ကို မျှော်လင့်နိုင်တဲ့ အခြေအနေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုက်အခံဘက်ကလည်း အစိုးရ လက်ဝေခံတွေရဲ့ လက်ထဲရောက်သွားမယ့် ခရီးသွား အစီအစဉ်တွေထက် ပြည်သူတွေ အကျိုးရှိမယ့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမျိုး ထွန်းကားဖို့ ပိုပြီး အားပေးချင်တာကို
တွေ့ရပါတယ်လို့ Euro News က ရေးသားဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် အီးယူအနေနဲ့ မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ရုပ်သိမ်းပေးနိုင်တယ်လို့ ပိုလန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ လာမယ့် ဧပြီလ (၂၃) ရက်နေ့ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် အီးယူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှု အများစုကို တစ်နှစ်တိတိ ယာယီ ဆိုင်းငံ့ပေးဖို့ အီးယူ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ သဘောတူညီထားကြကြောင်း ကြေညာအပြီးမှာ ပိုလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ Radoslaw Sikorski က ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး
လွတ်မြောက်ပြီး၊ မြန်မာပြည် နောက်ပြန် မလှည့်နိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ပြီဆိုရင် ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ အီးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေ အားလုံးဟာ လုံးဝ ပွင့်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ ၀ါဆောမြို့မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ အီးယူက ဆိုင်းငံ့ထားမယ့် ပိတ်ဆို့မှုတွေထဲမှာ သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်အချောထည် လုပ်ငန်းနဲ့ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ ကုမ္ပဏီ (၈၀၀) ကျော်နဲ့ ကုန်သွယ်ခွင့်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ( ၅၂) ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်၊ စစ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ သူတို့နဲ့ နီးစပ်သူ ပုဂ္ဂိုလ် စုစုပေါင်း (၄၉၁) ယောက်အပေါ် ဥရောပ၀င်ခွင့် ဗီဇာပိတ်ပင်ထားတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားမယ့် ပိတ်ဆို့မှုတွေထဲမှာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း
ရောင်းချမှု မပါဝင်ပါဘူး။ မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှု (၁၂) လတိတိ ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားစဉ်အတွင်း အခြေအနေ တိုးတက်မှုရှိမရှိကို အီးယူက အနီးကပ် အသေအချာ
စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလမှာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း အီးယူ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒါအပြင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုရင် (၁၂) လ မတိုင်ခင်အတွင်း အီးယူအနေနဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေ
ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းသွားနိုင် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပိုလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်း ပိုလန်နိုင်ငံဟာလည်း စစ်အစိုးရ လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဆောင်ရွက်လိုက်လို့ ပိုလန်ဟာ နောင်တမရတဲ့အပြင် စံနမူနာ ယူစရာတောင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ အတွက်လည်း နမူနာယူစရာပါလို့ ပြောဆိုပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ထင်းရူးကျေးရွာမှာ သင်္ကြန်ဒုတိယအကြတ်နေ့ ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ နေ့လည်(၁း၃၀)နာရီခွဲက လမိုင်းအပိုင်ကော့ဒွတ်ကျေးရွာမှ လူငယ်အများစုနဲ့ သံဖြူဇရပ်အပိုင်အနင်းကျေးရွာမှ လူငယ်အချို့ (စုစုပေါင်း၂၅ယောက်ခန့်) Canter အမြင့်(ဒေသအခေါ် ရှမ်းကား / လိုင်စင်မဲ့) တစ်စီးနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီး ရွာခံလူငယ်
အချို့ကို လေးခွနဲ့ပစ်၊ အုတ်ခဲကျိုး၊ခဲလုံးများဖြင့်ပစ်ပေါက်၊ ဒါးနဲ့လိုက်ရမ်း၊ ပေါက်တူးဖြင့်ခုတ်၊ သံတုတ်ဖြင့်ရိုက် လက်နက်မျိုိးစုံနဲ့ သောင်းကျန်းချင်တိုင်း သောင်းကျန်းခဲ့ကြပါတယ်။
စခန်းမှုးသန်းထိုက် ထံမှာ တိုင်တန်းဖို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော်တစ်ယောက်မှ မတွေ့ခဲ့ရပါ။ ရဲတပ်ကြပ်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ တပ်သားနှစ်ယောက်လိုက်လာပြီး သက်သေခံကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဓါးတစ်လက်ကိုသိမ်းဆည်းပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မှတ်တမ်း ယူသွားခဲ့ပါတယ်။သို့သော် ယနေ့အထိအရေးယူမှု တစ်စုံတရာ မပြုလုပ်ပေးကြပါ။ ငြိမ်းချမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ဒေသမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုက မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ စခန်းမှုးကို အမှုအကြောင်းမေးမြန်းတော့ အမှုဖွင့်ချင်ရင် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာမှ ဖွင့်လို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ထင်းရူးကျေးရွာဟာ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်နဲ့ ၁၈ မိုင်ခန့်ဝေးပါတယ်။
ကျော်ဇေယျ Myanmar News Now
4/21/2012 08:47:00 AM
သရုပ်ဆောင် ဇင်ဝိုင်း (ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ)နှင့် အင်တာဗျူး
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကအကြောင်း… (ယခင်၊ ယခုနှင့် နောင်ရေး) သရုပ်ဆောင် ဇင်ဝိုင်း (ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ)နှင့် အင်တာဗျူးမြန်မာ့ရိုးရာ
အတာသင်္ကြန်တွင်း ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အမျိုးသမီးအချို့၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အမိန့်အာဏာဖြင့် အရေးယူ လုပ်ဆောင်သွားမည် မဟုတ်ဘဲ မေတ္တာရပ်ခံ ပညာပေးနည်းဖြင့်သာ တုန့်ပြန်သွားမည်ဟု လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။လွတ်လပ်သော
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အမှုဆောင်များကို လျို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် သရုပ်ဆောင် ဇင်ဝိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကအကြောင်း၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပြန်ကြားရေးဌာန လက်အောက် ရှိ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကအတွက် အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်တို့ကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဦးဇင်ဝိုင်းအား မဇ္ဈိမ သတင်းထောက် မျိုးသန့် က မေးမြန်းထားသည်။
ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ပြန်လည်ရွေးချယ်ပွဲတွင် သရုပ်ဆောင်ဇင်ဝိုင်းနှင့် ဇာဂနာ တို့အား မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ) ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းရှိ အလွှာအလိုက် လျို့ဝှက်မဲဖြင့် ရွေးချယ်ကြရာ အဓိကသရုပ်ဆောင်အလွှာတွင် ဇင်ဝိုင်းနှင့် လူမင်း တို့အား ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
ဖွဲ့လိုက်တာ မကြာသေးတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌ အသစ်ဆိုတော့ ကျနော် ပထမဆုံးမေးချင်တာက ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာပေါ့။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအချို့ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဝေဖန်သံတွေ တော်တော်လေး ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲ။“ယေဘူယျ သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ယဉ်ကျေးမှု
စည်းတွေ လျော့ပါးလာတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်သည်နှစ်ပေါင်း ၃ဝ အတွင်းမှာတော့ လူတွေဟာ တော်တော်လေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ရွှင်လာကြတယ်လို့ကျနော်တော့ မြင်မိပါတယ်။ လူတွေဟာ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ကိုယ်စီ ရှိလာတယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ဒီယဉ်ကျေးမှု
လှိုင်းတံပိုးဆိုတာလည်း ရိုက်ခတ်တတ်တာ အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား နည်းရင်လည်း ဒီလိုမျိုး ဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲ။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ မိန်းကလေး အယောက်
၁ဝဝ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ဝတ်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်ဆိုတာ တယောက်လောက် ပါတာပါ။ သို့သော်လည်း ထင်ရှားတဲ့သူများ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူများ စံချိန်ထိုးစရာတော့ ဖြစ်တာပေါ့။ ဒါကလည်း သူ့ရဲ့ တဦးချင်း ခံယူချက်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။”ဆိုတော့ သူတို့ အပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်သုံးပြီးတော့ ကန့်သတ်မှုတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။“တချိန်သောအခါက
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသည် ဝန်ကြီးဌာနတခုက ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားတဲ့ အတွက် သူ့မှာ ကိုယ်တိုင် အရေးယူခွင့် မရှိသော်လည်း အမိန့်ပေး အရေးယူတာမျိုးတွေ လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကတော့ စည်းရုံးရေးနဲ့ပဲ သွားရမှာပါ။ ကျနော်တို့ သားသမီးတွေ အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့က ခေါ်ယူပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခံမယ် စည်းရုံးမယ် ဒါပဲလုပ်ရမှာပါ။ ကျနော်တို့လူမျိုးရဲ့ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေကို ပိုမိုခိုင်မာလာအောင်၊ ကျနော်တို့ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျနော်တို့ရိုးရာတွေကို ပိုမိုလက်ခံကျင့်သုံးလာနိုင်အောင် ကျနော်တို့ ကြိုးစားကြည့်ကြရမှာပါ။ ဒါကတော့ ရုပ်ရှင်တခုတည်းနဲ့လည်း မပြီးပါဘူး။ ဥပဒေတွေနဲ့ တားဆီးကောင်းတဲ့အရာတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရင်ထဲမှာ အသိတရားတွေ
ရှိလာမှ ဖြစ်လာမယ့်အရာပါ။ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းထက် အများပြည်သူဘက်က ပြစ်တင်လာမယ် ရှုတ်ချလာမယ်၊ စာနယ်ဇင်းတွေကလည်း ရေးသားလာကြမယ်၊ ပြည်သူတွေ ကလည်း ဖယ်ကြဉ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါမျိုးတွေ နည်းပါးလာမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။”ကြာသပတေးနေ့က ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသစ်ရဲ့ ပထမဆုံး အစည်းအဝေးမှာ ဘာတွေများ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါသလဲ။
“အလုပ်အမှုဆောင်တွေ လိုက်နာသင့်တဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းလေးတွေ ကျင့်ဝတ်လေးတွေ ချပေးတာပါ။အများပြည်သူနဲ့
ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ နှိမ့်ချဖို့တို့၊ အခွင့်အရေး ဆိုရင်လည်း သာမန်အစည်းအရုံးဝင်တွေ ရရှိတဲ့ အခွင့်အရေး မျိုးတွေကိုပဲ ခံစားဖို့၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဆိုပြီးတော့မှ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တာ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာတာ၊ အခွင့်အရေးပိုယူတာမျိုးမလုပ်ဖို့ ကျနော်တို့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ လုပ်တာပါ။”“ဒုတိယအချက်ကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ရေးဆွဲဖို့ ကျနော်တို့ အဓိကထားပါတယ်။ ကျနော်တို့က NGO ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် မူလဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာပါတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ တချို့အချက်တွေလည်း ဖြည့်စွက်ရမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေး
ကော်မတီကိုလည်း ဖွဲ့စည်းတာပါ။ ဗီဒီယို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီတို့၊
ခိုးကူးခွေ တားဆီးရေးကော်မတီတို့၊ ဝန်ထမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတို့၊ ကော်မတီပေါင်း ၁၆ ရပ် ရှိပါတယ်။”အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တာ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာတာ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးတွေကို ဆိုလိုတာလဲခင်ဗျာ့။"ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်
နိုင်ငံတကာက ဖိတ်ကြားလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံတကာက ဆုပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရင့်အရင်တုန်း ကတော့ အများပြည်သူ မသိရှိလိုက်ရဘဲနဲ့ ကော်မတီဝင်အချင်းချင်းပဲ လက်သိပ်ထိုးပြီးတော့ သူသွား ကိုယ်လုပ် အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။ နောက် ပြင်ပက ဇာတ်ကားတကား ရိုက်ကူးဖို့ဆိုရင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ထဲကပဲ သယ်ဆောင် လာပြီးတော့ ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနက ရိုက်ကူးဖို့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဒါရိုက်တာလုပ်၊ သူ့သားသမီး မင်းသားမင်းသမီးထည့် ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က အခု မူချမှတ်ထားတာတော့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကားတွေ ရိုက်ကူးမယ်၊ ပြင်ပက ကားတွေ ရိုက်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ အစည်းအရုံးထဲမှာပါနေတဲ့ ဒါရိုက်တာများ လုံးဝ မရိုက်ကူးပါနဲ့။ သရုပ်ဆောင်များလည်း လုံးဝ မပါပါနဲ့။ ကျနော်တို့တွေသည် သူများကို အခွင့်အရေး ပေးရမယ်။ ကိုယ်က အခွင့်အရေးကို နောက်ဆုတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ဒီမူကို ချထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ထပ်ထွက်လာပါမယ်။”
ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ပြန်လည်ရွေးချယ်ပွဲတွင် ရရှိမဲများအား ရေတွက်နေကြသည့် ဒါရိုက်တာဝိုင်း၊ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ဦးညွန့်ဝင်း တို့အား မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ
- မဇ္ဈိမ) ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းရှိ အလွှာ ၁ဝ လွှာမှ လျို့ဝှက်မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံလည်း ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးဖြစ်မလဲ။"ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာ
ခြံစည်းရိုးနဲ့ တူတာကိုး။ ခြံစည်းရိုးမခိုင်တဲ့အခါကျတော့ ဒီဝင်းထဲကို ဝင်ချင်တဲ့လူဝင် ထွက်ချင်တဲ့ လူထွက်နဲ့ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ မူလဖွဲ့စည်းပုံကလည်း အဆင့်ဆင့်သာ တင်ပြနေကြတာ အခုထိကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင်လောက ကလည်း တံခါးမရှိ ဓါးမရှိပါပဲ။ အခုတော့ ကျနော်တို့က ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသည် ရုပ်ရှင်စစ်စစ် သမားများသာ ဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုတဲ့ မူကိုတော့ အဓိက ကိုင်စွဲထားပါတယ်။”အရင် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဟောင်းရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကကော။“ရေးခဲ့သမျှသော
ဖွဲ့စည်းပုံများထဲမှာ အောက်ခြေက အစည်းအရုံးဝင်များကိုသာ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အချက်အလက်တွေ ပါပေမယ့် အလုပ်အမှုဆောင်များကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထား တဲ့ အချက်အလက်တွေ မပါတာပါ။”ရုပ်ရှင်အစည်းရုံးဝင် ဖြစ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှင်းပြပေးဦး ခင်ဗျာ့။
“ဥပမာ အဓိက သရုပ်ဆောင်ဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အနည်းဆုံး တကား ရိုက်ကူးဖူးရမယ်။ ဗီဒီယိုဆိုရင် ၁ဝ ကား ရိုက်ကူးဖူးရမယ်။ ဒါမှသာ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဝင် ဖြစ်မယ်။အဲဒီလို သတ်မှတ်ချက်တွေ အရသာ၊ အစည်းရုံးဝင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ သို့သော်လည်း တချို့ခေတ်များမှာတော့ အထူး မှတ်ချက်ဆိုပြီးတော့ တချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို အစည်းအရုံးကို
တိုက်ရိုက်ဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ တံခါးပေါက်တွေ ဖွင့်ပေးထားတာ ရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုဘွဲ့တခုခု ရရှိလာ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ အစည်းအရုံး ဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုပြီးတော့ လုပ်တာရှိပါတယ်။ နောက်တခုကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ၁ဝ နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ၊ လက်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူ အဲဒါမျိုးတွေက အရင်တုန်းက အစည်းရုံးဝင်ဖြစ်မှုအပေါ်မှာ သတ်မှတ်ချက်တွေပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့က လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ဖို့အတွက် ပြင်ပက ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်မလာနိုင်အောင်လို့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ပြန်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။”အခု ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အဟောင်းနဲ့ အသစ် နှစ်ခုရဲ့ မြင်သာတဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာဖြစ်မလဲ။“အဟောင်းကတော့
သူက ကြိုးပေါင်းစုံနဲ့ ချည်ထားကြတာခင်ဗျာ့။ ကျနော်တို့ရှေ့က အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဆိုရင် ၂၆ ယောက်ရှိပါတယ်။ ၂၆ ယောက်ထဲမှာ ၁၃ ဦးကို တိုက်ရိုက်ခန့်ထားတာပါ။ ၁၃ ဦးကတော့ ရွေးချယ်ခံပေါ့။ရွေးချယ်ခံ ဆိုသော်လည်း အများရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ တက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ကျနော် ဇင်ဝိုင်းသည်
သရုပ်ဆောင် အလွှာမှာ ရွေးလိုက်လို့ မဲ တမဲပဲရတယ်။ သရုပ်ဆောင်လူမင်းက ရွေးလိုက်လိုက်လို့ မဲ ၁ဝဝ ရတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း ဆိုရင်တော့ ဦးလူမင်း တက်ရမှာပေါ့ အခုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ‘ဇင်ဝိုင်း တက်’ဆိုပြီးတော့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ပေးလိုက်ရင် ကျနော်က တက်သွားတယ်။ မဲ ၁ဝဝ ရတဲ့လူက အောက်မှာကျန်ခဲ့တယ်။ တိုက်ရိုက်ခန့် ဆိုတာ ကတော့ ဒီလူကို ခန့်လိုက်ပါဆိုရင်
ပြီးသွားပြီ။”“အဲဒီအခါကျတော့ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ကျနော်တို့ လောကကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ ဒီအလုပ်အမှုဆောင်ထဲ မှာ ကိုယ့်လောကရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာ တဘက်က ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အလုပ်အမှုဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ စိတ်ကောင်း စေတနာရှိတဲ့လူတွေမှာလည်း သူတို့ကို ချည်နှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေကြောင့် ရုန်းမထွက်ကြဘူး ဖြစ်ကြတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဒီကြိုးတွေကို အကုန်လုံး ဖြတ်တောက်ဖို့ ကြိုးစားကြတာပါ။”ရုပ်ရှင်ကားတွေဟာ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုတွေဟာ နိုင်ငံတခုအတွက် ဘယ်လောက် အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။“ကျနော်တို့က ရုပ်ရှင်ဆိုပေမယ့်၊ ရုပ်ရှင်ဆိုတာဟာ အမျိုးသားရေး လက်နက်တခုပါ။ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးကို
ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေရဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ ဓလေ့ စရိုက်တွေ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ ကျနော်တို့ကို သဘာဝပေးထားတဲ့ အလွန်လှပတဲ့ ရေမြေတောတောင်တွေ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ အနုပညာနဲ့ ကမ္ဘာကသိအောင် မြန်မာဆိုတာ ဒါလို့ ပြနိုင်အောင် ကျနော်တို့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ လောကသားတွေချည်းပဲ လုပ်လို့မရပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကအစ ရုပ်ရှင်ဆိုတာ မပျောက်ပျက်အပ်သော အမျိုးသားရေးလက်နက်တခုပါလား ဆိုတာကို အမြင်ကျယ်ကျယ်လေး ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ကို ဝိုင်းဝန်းဖေးမမှသာ ကျနော်တို့ သွားလိုတဲ့ လမ်းခရီးကို ရောက်မှာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့သည် သေခါနီး လူမမာလိုပါပဲ။ အခုန ကျနော်ပြောသလိုပါပဲ မကူညီရင်တော့ တားဆီးတာတွေ ပိတ်ပင်တာတွေ မလုပ်ကြဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်စစ်စစ်နဲ့ တကယ်စစ်မှန် တဲ့ အနုပညာတွေ ဖန်တီးကြည့်ချင်ပါတယ်။ တစုံတဦးက ခိုင်းလို့ အဖွဲ့အစည်းတခုက ခိုင်းလို့ဆိုတဲ့ အနုပညာတွေ ကျနော်တို့ မဖန်တီးချင်တော့ပါဘူး။ ဒါမှသာလျှင် ကျနော်တို့ ‘အောက်ပိုင်း’က မလွတ်တဲ့ ဟာသကားတွေ၊ ကလိထိုး ရယ်ခိုင်းတာတွေရဲ့ ဘဝကနေ လွတ်မြောက်မှာပါ။”ရုပ်ရှင်လောကအတွက် အဓိက ကန့်သတ်ချက်က ဘာဖြစ်မလဲ။
ကားရိုက်ပါတော့မယ်ဆိုရင် ဒီဇာတ်ဆို လွတ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ်ကြီးနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်ကြရပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ
ဖြန့်ကျက်တွေးတာတို့၊ တီထွင်ဖန်တီးတာတို့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ လွယ်ပါတယ်ကွာ အဆင်ပြေအောင် ဟာသကားပဲ ရိုက်လိုက်ကြတာပေါ့ ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်လာတာပါ။
“ဆင်ဆာ ကန့်သတ်ချက်က အလွန် ပြင်းထန်တယ်ခင်ဗျာ့။ ဆင်ဆာက အစက ၁၂၄ ချက်နဲ့ ပိတ်ဆို့ထားတာ ရှိပါ တယ်။ အချက်အလက်ပေါင်းများစွာ ဆွဲဆန့်လို့ရပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် မလွတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က စတင်ပြီးတော့ ကားရိုက် ပါတော့မယ်ဆိုရင် ဒီဇာတ်ဆို လွတ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယ စိတ်ကြီးနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်ကြရပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာဖြန့်ကျက်တွေး တာတို့၊ တီထွင်ဖန်တီးတာတို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ လွယ်ပါတယ်ကွာ အဆင်ပြေအောင် ဟာသကားပဲ ရိုက်လိုက်ကြတာပေါ့ ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်လာတာပါ။နောက်တခုက
ရုံတင်တဲ့အခါမှာ လည်း ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ရုံပေါင်း ၂၃၈ ရုံရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင် ၆၅ ရုံပဲကျန်ပါတယ်။ ၆၅ ရုံမှာ သုံးပုံတပုံပဲ မြန်မာကားကို ပြပါတော့တယ်။ ပြည်သူပိုင်သိမ်းတယ် အဲဒီရုပ်ရှင်ရုံနေရာမှာ ဟိုတယ်ကြီးတွေသာ ပေါ်လာ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ရုံပျောက်သွားပါတယ်။”ဦးဇင်ဝိုင်း ခုန ပြောခဲ့သလိုပဲ ရုပ်ရှင်လောကအတွက် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ ပြင်ဆင်နေကြပြီပေါ့၊ ဒီပြင်ဆင်မှုတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်ခွင့် ရှိမယ်လို့ ယူဆပါသလား။“ကျနော်ကတော့
ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ့။ ရုပ်ရှင်လောက မြင့်တက်လာခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ဘက်စုံထောင့်စုံ ဖွံ့ဖြိုးမှသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်လို့
ပြောလို့ရပါတယ်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နိုင်ငံရေး တိုးတက်ဖို့လိုသလို ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင်အနုပညာလောကလည်း တိုးတက်ဖို့ လိုပါ တယ်။ အခုအစိုးရကလည်း ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အစိုးရပါ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းကမှ ဝင်ရောက်ဟန့်တားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအခွင့်အရေး မပေးဘူးဆိုလည်း ကျနော်တို့ကို အခြေခံဥပဒေက ပေးအပ်ထားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကိုင်စွဲပြီးတော့ ဥပဒေတွေကို မဖေါက်ဖျက်ဘဲနဲ့ ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။”အနာဂတ် ရုပ်ရှင်လောကအတွက် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ရဲ့ အိမ်မက်က ဘာဖြစ်မလဲ။“ကျနော့်လက်ထဲကို၊
စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့လောကကြီးကို ဘာမှမသိတဲ့ ဇင်ဝိုင်း လက်ထဲကို ရှေ့လူတွေက လွှဲပေး ခဲ့တာပါ။ ကျနော့်လက်ထက်ကျရင်တော့ ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူး။ ဒီ့ထက်ပို ခိုင်မာတဲ့ ဒီ့ထက်ပိုမြင့်မားတဲ့ ပရိသတ်ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်လောကကို ဖန်တီးပြီးတော့ ကျနော့်ထက် တကယ်တတ်တဲ့ တကယ်သိတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသိတဲ့ ကလေးတွေ ကျနော့် မျိုးဆက်သစ်တွေ လက်ထဲကို ကျနော် ထည့်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ အခု နိုင်ငံတကာ ပွဲတွေသွားရင် မင်းသားတွေကလည်း သူတို့ မင်းသားမင်းသမီးတွေကို မော့ကြည့်နေရတယ်။ ဒါရိုက်တာတွေကလည်း ဒါရိုက်တာချင်းယှဉ်ရင် သိမ်ငယ်နေရတယ်။ ထုတ်လုပ်သူချင်း ယှဉ်ရင်လည်း သိမ်ငယ်နေရတယ်။ ကျနော်တို့မှာ အရမ်းရှက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီဘဝမျိုးတွေ မဖြစ်စေချင်တော့ဘူး။ နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာ ကျနော်တို့ တင့်တင့် တယ်တယ်နဲ့ တက်မယ်။ သူတို့ ကားပေါင်း ၁ဝဝ ရိုက်ပေမယ့်၊ ကျနော်တို့ တကားပဲ ရိုက်သော်လည်း ကျနော်တို့ ကားသည် ကျနော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ စံချိန်အရ၊ အနုပညာအရ တန်းမီတဲ့ ကားမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ ကျနော် ရည်ရွယ်ပါတယ်။”
4/21/2012 07:03:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း (မူကြမ်း)ကို
ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာသမားများနှင့် သတင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်များသာ ဖြစ်ရပါမည်။ အမည်နှင့် သတင်းအဖွဲ့အစည်းအမည်ကို ဖော်ပြပေးပါရန်။
ဖွဲ့တည်ခဲ့ပေသည်။ ထိုနောက်တစ်ပါတီစနစ်အောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံစာပေလုပ်သားအဖွဲ့ဟူ၍ စာရေးဆရာအဖွဲ့ခွဲနှင့်သတင်းစာဆရာအဖွဲ့ခွဲကို
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ယင်း ရွေးကောက်ပွဲ
အသင်းဟူ၍ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း မဟုတ်သည့် သီးခြား လွတ်လပ်သော အသင်းအဖွဲ့ NGO)
များအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သွားရန် ၂၀၁၂ခုနှစ်
မတ်လ ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ အရေးပေါ်ညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေသည်။ ၃။
၁၉၈၈ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ထူထောင်ရေးကို စွန့်လွှတ် စွန့်စားမှုများစွာဖြင့် ဦးတည် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရာ ပြည်သူများ၏
ထင်ဟတ်ခြင်းနှင့် ဦးဆောင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသည့် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော သတင်းမီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ယခင်ကထက် ပို၍
စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ရရှိခံစားနိုင်ရန်နှင့် သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ လွတ်လပ်စွာ
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းကို ဖော်ပြပါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ပေသည်။ အခန်း (၁)
(ဇ) အသင်း ဆိုသည်မှာ (ရှေ့တွင် ဖော်ပြသော အပိုဒ်များ၌ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင်မှု
မရှိလျှင်) မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာ အသင်းကို ဆိုသည်။ အသင်းဝင် ဆိုသည်မှာ
သတင်းစာဆရာ အသင်း၏ အသင်းသူ၊ အသင်းသားများကို ဆိုသည်။ သဟာယ အသင်းဝင် ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ
တစ်စုံတစ်ရာကို လုပ်ကိုင်နေသူများထဲမှ အသင်းဝင်အဖြစ် ပါဝင်လာသူကို ဆိုသည်။
စည်းမျဉ်း ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာ အသင်း၏
အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးရေး၊ စည်းရုံးရေး၊ လှုံ့ဆော်ပညာပေးရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေး၊ ကျင့်ဝတ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး၊
အသင်းဝင်မဟုတ်သူဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းမှဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ် ^ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ညီလာခံကသော်လည်းကောင်း၊ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး
ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရမည်။ အခန်း (၅)
(ခ) အသင်း၏ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရေးအတွက် အကြံပြုချက်၊ ဝေဖန်ချက်များကို
ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သို့
(ဆ) တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်း ဦးဆောင်မှု မဖြစ်စေဘဲ စုပေါင်းဦးဆောင်မှု၊
တစ်ဦးချင်း တာဝန်ယူမှု တို့ဖြင့်သာ အသင်း၏ ကိစ္စအ၀၀ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
လူမှုရေးရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အသင်းအဆင့်ဆင့်သည် အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များဘောင်အတွင်းမှသာ
တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့က လိုအပ်သည်များကို စိစစ်၍ တာဝန်မှ ရပ်စဲနိုင်သည်။ ထိုသို့ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းကို ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး
ဖြစ်ပါက ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့၏ အနီးကပ်ဆုံး နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကို လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပရမည်။ အစည်းအဝေးများကျင်းပရာတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၏ ၆၀
အသင်းဝင်ဦးရေ ၂၀ ဦး မပြည့်သော ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသ ကြီးများတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး
တင်သွင်းရမည်။ အဆိုပါတင်သွင်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတို့ကို
လုပ်ငန်းအခြေအနေကို အစီရင်ခံရမည်။ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ လစ်လပ်ပါက ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ်
လစ်လပ်သွား သည့် ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အတွက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုအခြေအနေကို
၄၃။ ညီလာခံကို လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ကျင်းပရမည်။ လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပသည့်
အသင်း၏ညီလာခံကို လိုအပ် ပါက ပုံမှန်ကျင်းပရမည့်ရက်မတိုင်မီ ရက်ပေါင်း ၁၈၀
၄၇။ ညီလာခံတွင် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များကို ဦးစွာပထမ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည့် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်ဦးရေနှင့် အခြေခံအဖွဲ့အသီးသီးမှ
ရွေးချယ်စေလွှတ်ရမည့် စနစ်ကို ညီလာခံက သတ်မှတ်ပေးရမည်။ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့က ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များကို ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ထပ်မံ
၄၈။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းညီလာခံတွင် ပြုလုပ်သည့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကို တက်ရောက်လာသော ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ အားလုံး၏
ထက်ဝက်ကျော်ဆန္ဒမဲရရှိမှသာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းသည် အတည်ဖြစ်သည်။
၄၉။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း အရေးပေါ်ညီလာခံကို လိုအပ်လျှင် ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။ အရေးပေါ် ညီလာခံကို နောက်ဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည့်
ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းက တောင်းဆိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဗဟို အမှုဆောင်အဖွဲ့က လိုအပ်လျှင်ဖြစ်စေ ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။
၅၀။ (က) ညီလာခံက ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့သည် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် မိမိတို့အထဲမှ ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌများ၊ အတွင်းရေးမှူး၊
ဘဏ္ဍာရေးမှူးတို့ကို ရွေးချယ်ရမည်။ ထိုနောက် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် သတ်မှတ်ဦးရေနှင့်အညီ ရွေးချယ်ရမည်။ ယင်းသို့ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့က
ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနှင့်
(ခ) အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး လစ်လပ်ပါက ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်သောအစည်းအဝေးက
ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကို အများဆန္ဒဖြင့် တာဝန်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့ တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းကို အနီးကပ်ဆုံး နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးသို့
(ဂ) ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် မိမိတက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ကို မှန်မှန် တက်ရောက်ရမည်။
(ဃ) ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် မည်သည့်ကိစ္စဖြင့်မဆို နိုင်ငံခြားသို့ တစ်နှစ်သွားရောက် နေထိုင်ပါက လက်ရှိဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တာဝန်မှ
၅၁။ ဗဟိုစာရင်းစစ်အဖွဲ့သည် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် မိမိတို့အထဲမှ စာရင်းစစ်မှူးကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော
စာရင်းစစ်မှူးသည် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့၏ စာရင်းစစ်မှူးဖြစ်သည်။
၅၂။ (က) ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီးသတင်းစာဆရာအသင်း အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ဗဟိုအမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရလျှင်
ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် တာဝန်များကို စွန့်လွှတ်ရမည်။
(ခ) လေးနှစ်တစ်ကြိမ် အသင်း၏ညီလာခံကို ပုံမှန်မပြုလုပ်နိုင်သောအခါ လက်ရှိဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့နှင့် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အသင်း၏လုပ်ငန်းအ၀၀ကို
၅၃။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က) အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် အောင်မြင်ရေးအတွက် နိုးကြားတက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်ရန်။
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းဝင်များ၏ အသိစိတ်ဓာတ်နှင့် အတွေးအခေါ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စည်းရုံးပညာပေးလှုံ့ဆော်ရန်။
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းဝင်များ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းဝင်များ၏ ဘ၀အခြေအနေ တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရန်။
(င) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို စည်းရုံးရေးအသွင် ဖြင့် ကူညီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်။
၅၄။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က) အသင်းဝင်များ၏ တရားသဖြင့် ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများ၊ နစ်နာမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသော ကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
(ခ) အသင်းဝင်တစ်ဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်းမှ ပြဌာန်းသော စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်များကို ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် စည်းရုံးရေးနည်းဖြင့်
(ဂ) အသင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညီနောင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ခြင်း။
(ဃ) သတင်းဆုများ ချီးမြှင့်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များအား လိုအပ်သလို ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
(င) နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၅၅။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းညီလာခံသည် အသင်း၏ အမြင့်ဆုံး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ညီလာခံ၏ တာဝန်များမှာ
(က) ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့က တင်သွင်းသော အစီရင်ခံစာများ၊ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေရှင်းတမ်းများနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
(ခ) အသင်း၏ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း။
(ဂ) အသင်းနှင့်ပတ်သက်သော စည်းရုံးရေး၊ လှုံ့ဆော်ပညာပေးရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေးစသည့် ကိစ္စများကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
(ဃ) အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း။
(င) အခြားလိုအပ်သော သတင်းလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၅၆။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းညီလာခံမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ကို တာဝန်ခံရမည်။ ညီလာခံ တစ်ခုနှင့်
တစ်ခုအကြား၊ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားတွင် အသင်း၏လုပ်ငန်းအားလုံး ညီလာခံကိုယ်စား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၅၇။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် လစဉ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများကို ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်လျှင် အထူးအစည်းအဝေး ကို ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။ အဆိုပါ
အစည်းအဝေးများသို့ စာရင်းစစ်အဖွဲ့ဝင်များကို တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားနိုင်သည်။
၅၈။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူရရှိစေရန် ဗဟိုအမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များအပြင် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်
အခြားသင့်လျော်သော အသင်းဝင်များဖြင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အခြားကော်မတီများနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၅၉။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အခြားကော်မတီများနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ရမည်။
၆၀။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်သော ဗဟိုအမှု ဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် အများဆန္ဒအရ တာဝန်မှ
ရပ်စဲနိုင်သည်။ ထိုသို့ တာဝန်မှရပ်စဲခဲ့ခြင်းကို အနီးကပ်ဆုံး ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
၆၁။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် စည်းကမ်းအရ အရေးယူရန် ကိစ္စများကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၆၂။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း မပြုနိုင်သော နေရာများတွင် ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး
စည်းရုံးရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ လိုအပ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံစည်းမျဉ်းနှင့် မညီညွတ်သော ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး
သို့မဟုတ် စည်းရုံးရေး ကော်မတီကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယင်းဆောင်ရွက်ချက်ကို အနီးကပ်ဆုံး
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး သို့မဟုတ် ဗဟို ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရမည်။
၆၃။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းကို ရေးဆွဲ၍ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်း အဝေးသို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
ဆောင်ရွက်ချက်များကို အနီးကပ်ဆုံး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး သို့မဟုတ် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ အစည်းအေဝေးသို့ တင်ပြရမည်။
၆၄။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် လိုအပ်သော ညွှန်ကြားချက်များကို အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၆၅။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီးအသင်းများက တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ အသင်းများ၏ လုပ်ငန်းများကို
ဦးဆောင်လမ်းလွှန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည်။
စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၆၆။ စာရင်းစစ်အဖွဲ့သည် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ကို တာဝန်ခံရမည်။
၆၇။ စာရင်းစစ်အဖွဲ့သည် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ မိမိ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို အစီရင်ခံစာ တင်ပြရမည်။
၆၈။ စာရင်းစစ်အဖွဲ့သည် အသင်း၏ ရငွေ-သုံးငွေများအား ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းတို့ကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း နှင့်အညီ မှန်ကန်မှုရှိအောင် စနစ်တကျ စစ်ဆေးရမည်။
၆၉။ စာရင်းစစ်အဖွဲ့သည် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့အား အသိပေးတင်ပြခြင်း၊ အကြံပြု ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
၇၀။ စာရင်းစစ်အဖွဲ့သည် လစဉ်အစည်းအဝေးကို ပုံမှန်ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူ ကျင်းပနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့က
ဖိတ်ကြားသည့် အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ရမည်။
၇၁။ စာရင်းစစ်အဖွဲ့သည် စာရင်းစစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား အရေးယူရန် လိုအပ်ပါက ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။
ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်း၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၇၂။ ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းကို တာဝန်ခံရမည်။
၇၃။ ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး စည်းရုံးရေးကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ
(က) ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာများအသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်အောင်
ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို့ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်။
(ခ) ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းသည် ညီလာခံက ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့က ချမှတ်ပေးထားသော
လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
(ဃ) မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွင် မိမိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာ၊ ဘဏ္ဍာရေး
အခြေအနေနှင့် ရှင်းတမ်းများကို တင်သွင်းရမည်။
(င) ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ (သို့မဟုတ်) စည်းရုံးရေး ကော်မတီဝင်များနှင့် အသင်းဝင်များပါဝင်သော
အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းကော်မတီများကို လိုအပ်ပါက ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
(စ) လစဉ်အစည်းအဝေးကို ပုံမှန်ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်လျှင် အထူးအစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။
(ဆ) ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့
ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များကို တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားနိုင်သည်။
(ဇ) ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) စည်းရုံးရေး ကော်မတီသည် အသင်းဝင်တစ်ဦးဦးကို စည်းကမ်းအရ အရေးယူရန်
လိုအပ်လျှင် အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာဖြင့် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။
(ဈ) ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အသင်းဝင်များထံမှ နှစ်စဉ်ကြေးများ အပြည့်အ၀ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်
၇၄။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အသင်း၏ အကျိူးစီးပွား အတွက် ထူးချွန်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်သော
ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းကိုလည်းကောင်း၊ အသင်းဝင်များကိုလည်းကောင်း ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်၍ လိုအပ်သလို ချီးမြှောက်နိုင်သည်။
အရေးယူခြင်း၊ အပြစ်ပေးခြင်းနှင့် အယူခံခြင်း
၇၅။ (က) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းဝင်တစ်ဦးသည် အသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းပါ အချက် များကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ပါက အသင်း၏
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းဝင်တစ်ဦးသည် အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ပါက မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း၏
တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း ခံရမည် -
(၁) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ညှိုးနွမ်းအောင် ပြုမူ၊ ပြောဆို ရေးသားဖြန့်ချိခြင်း။
(၂) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ညှိုးနွမ်းအောင် ပြုမူ၊ ပြောဆို ရေးသားဖြန့်ချိခြင်း။
၇၆။ အသင်း၏ စည်းကမ်းများအရ အရေးယူအပြစ်ပေးသည့်အခါ အောက်ပါမူများပေါ်တွင် အခြေခံရမည် -
(က) တာဝန်နှင့်အဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲ အသင်း၏ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း။
(ခ) အသင်းဝင်တစ်ဦးအား အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းသည် အသင်းဝင်အနေဖြင့် နောင်အပြစ်ထပ်မံကျူးလွန် ခြင်းမရှိစေရန် ပညာပေး ပြုပြင်သည့်သဘောဖြစ်ခြင်း။
(ဂ) မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အကျိုး၊ အသင်းဝင်ထု၏အကျိုးနှင့် အသင်း၏ အကျိုးတို့ကို မထိခိုက်စေရန် ကာကွယ်ခြင်း
၇၇။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အရေးယူခြင်း၊ အပြစ်ပေးခြင်း၊ အယူခံခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းရမည်။
၇၈။ အသင်းဝင်တစ်ဦးဦးသည် မိမိအပေါ်ချမှတ်ထားသည့် ပြစ်ဒဏ်ကို မကျေနပ်ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း
အယူခံနိုင်သည်။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံသို့ တင်ပြ၍ အယူခံခွင့်ရှိသည်။
၇၉။ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ အသင်း၏ ညီလာခံက ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
၈၀။ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်းသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းတွင် ပြဌာန်းထားချက် များအား ပြင်ဆင်လိုပါက အသင်းညီလာခံ
ကျင်းပခြင်းမပြုမီ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြိုတင်၍ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရမည်။
၈၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် -
(က) ပြင်ဆင်ချက်ကို ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့က ရေးသားပြုစုပြီး အသင်းညီလာခံမတိုင်မီက ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင်၍ ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး
သတင်းစာဆရာများအသင်းများသို့ အဆိုပြုထားပြီး ဖြစ်ရမည်။
(ခ) အသင်းညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိ၍ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း တက်ရောက်သည့် ညီလာခံကသာ
ပြင်ဆင်ချက်ကို စဉ်းစားဆွေးနွေး အတည်ပြုနိုင်သည်။
(ဂ) အဆိုပါ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိ၍ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၏ အများစု ထောက်ခံသော ပြင်ဆင်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ရမည်။
ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် နည်းစနစ်များပြဌာန်းခြင်း
၈၂။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် နည်းစနစ်များကို ပြဌာန်းရမည်။
၈၃။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းကို ပြဌာန်းရမည်။
အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးနှင့် အသင်း၏ ရန်ပုံငွေ
၈၄။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းသည် မိမိအသင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၈၅။ အသင်း၏ ရန်ပုံငွေများကို အောက်ပါတို့မှ ရယူရမည် -
(က) အသင်းဝင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေး၊
(ခ) အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ရရှိသော ထောက်ပံ့ငွေ၊ လှူဒါန်းငွေ၊
(ဂ) အသင်း၏ လုပ်ငန်းများမှ ရငွေ၊
(ဃ) ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ရရှိသော အခြားငွေများ၊
(င) နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒများနှင့် ညီညွတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထူထောင်လုပ်ကိုင် သည့် လုပ်ငန်းများမှ ရသောငွေများ။
၈၆။ ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အသင်း၏ ရန်ပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ သုံးစွဲ၍ အသင်းညီလာခံ သို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
၈၇။ ပြည်နယ်^တိုင်းဒေသကြီး အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အသင်း၏ ရန်ပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ သုံးစွဲ၍ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးသို့
၈၈။ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းပါ စကားရပ်တစ်ခုသော်လည်းကောင်း၊ စကားရပ်များကိုသော်လည်းကောင်း အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် မရှင်းလင်းပါက
ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့က အဆုံးအဖြတ်ပေးပြီး အနီးကပ်ဆုံးညီလာခံ သို့မဟုတ် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့အစည်းဝေးသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။
၈၉။ မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသူများအသင်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာ ဆရာအသင်း၏
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များ တိုးချဲ့သတ်မှတ်နိုင်သည်။
4/21/2012 06:31:00 AM